Edebiyat / साहित्य – Diyaloglar | OpenTran
Edebiyat / साहित्य – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-nepali çeviri Edebiyat / साहित्य – Diyaloglar
जुलिया: नमस्ते, माइक। तिमीलाई कस्तो छ?
आदम: हाई, हेलेन। म आराम छु धन्यवाद। र तपाईं?
जुलिया: म पनि राम्रो छु। स्कूल कस्तो छ?
आदम: सबै ठीक छ। मसँग सबै विषयहरूमा उत्कृष्ट अंकहरू छन्। समस्या केवल साहित्य हो। तपाईंलाई थाहा छ म पढ्ने फ्यान होइन।
जुलिया: हो, मलाई थाहा छ। मेरो बारेमा बोल्दै, मलाई साहित्य मन पर्छ र मँ धेरै पढ्छु।
आदम: ठ्याक्कै यस्तै हो मैले तपाईंलाई आउन भने। हामीले मनपर्ने पुस्तकको छोटो सारांश लेख्नुपर्दछ। ठिक छ, मसँग कुनै छैन। मैले सोचें कि यदि तपाईंले मलाई यस कार्यमा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने। बदलामा म तिमीलाई गणितको साथ सहयोग गर्न सक्छु।
जुलिया: राम्रो लाग्छ। म खुशीसाथ तपाईंलाई मद्दत गर्दछु।
आदम: त्यसोभए, तपाईको मनपर्ने पुस्तक के हो र हामी के लेख्न लागिरहेका छौं?
जुलिया: म जे। डी। सालिंगरको उपन्यास Cat द क्याचर इन द राई about को बारेमा लेख्न चयन गर्छु। यो मेरो मनपर्ने पुस्तकहरू मध्ये एक हो।
आदम: यो के हो?
जुलिया: यो एक किशोर केटाको जीवनको बारेमा मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो। वास्तवमा कथानक बरु रमाइलो छ।
आदम: एक चाखलाग्दो पुस्तक जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ कि एक दिन यो पढ्नु पर्छ। अर्को के सारांशमा हामी उल्लेख गर्न सक्छौं?
जुलिया: हामीले मुख्य नायकको जीवनमा हुने कठिनाइहरूको बारेमा लेख्नुपर्दछ।
आदम: कुन कठिनाइ?
जुलिया: लेखकले होल्डन काउफिल्डको जीवन वर्णन गरे जब उनी घबराइरहेका थिए। ऊ सोह्र वर्षको छ र उसको अहिले मेडिकल संस्थानमा उपचार भइरहेको छ। ऊ एक्लो र निराश महसुस गर्छ। हामीले सारांशमा यी सबै तथ्यहरूको उल्लेख गर्नुपर्दछ।
आदम: अरु के?
जुलिया: ठीक छ, हामीले यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि उपन्यासका घटनाहरू क्रिसमसको ठीक अघि न्यु योर्कमा हुन्छन्। केटा शूलबाट बाहिर निकालियो, तर ऊ आफ्ना बाबुआमालाई भन्न चाहँदैन, किनकि उसलाई पहिलो पटक निकाला गरिएको छैन। ऊ छात्रावासमा फर्केर जान सक्दैन किनकि उसको रूममेटसँग विवादास्पद थियो। उसले गर्न सक्ने सबै सस्तो होटेलमा रहनु हो।
आदम: जारी राख्नुहोस्, कृपया, म नोटहरू बनाउँदैछु।
जुलिया: ऊ सबैतिर समर्थन र कम्तिमा केही बुझाइ खोज्दछ, तर ऊ भेट्टाउँदैन, जसले उसलाई झनै निराश बनाउँछ। बाटोमा ऊ धेरै दुर्घटनाहरूको सामना गर्दछ र घर पुग्दा पनि उसले केही बुझ्दैन।
आदम: अन्तमा के हुन्छ?
जुलिया: ठीक छ, उनलाई सबै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू पछि होल्डन एक मानसिक ब्रेकडाउनबाट ग्रस्त छ र मानसिक रोग केन्द्रमा उपचार लिन पठाइन्छ।
आदम: कस्तो दु: खी! म बुझ्दिन किन कि पुस्तकलाई «द क्याचर इन द राई called भनिन्छ।
जुलिया: तपाईको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ छ। यो अभिव्यक्ति तब प्रकट हुन्छ जब उनकी कान्छी बहिनीले उनलाई सोध्यो उनी जीवनमा के गर्न चाहन्छ। उनी भन्छन् कि राईको मैदानमा नजिकै खेल्ने बच्चाहरूलाई चट्टानमा जानबाट रोक्न उनी राईमा पक्रन चाहन्छन्।
आदम: यो मैले भन्नु पर्छ कि एक महान उत्तर हो। ऊ सबै कुरा पछि दयालु हृदयको साथ एक राम्रो व्यक्ति हुनुपर्दछ।
जुलिया: यो सत्य हो। जबकि उपन्यास दु: खी छ र नकारात्मक क्षणहरूले भरिएको छ।
आदम: खैर, यो एक उत्तम कथा जस्तो देखिन्छ। म पक्का छु कि श्रीमती लिनले हाम्रो सारांशको कदर गर्दछ।
जुलिया: मलाई आशा छ।
Yabancı Dil Öğrenmek विदेशी भाषाहरू सिक्दै
Komşular Hakkında Şikayet Etmek छिमेकीहरूको बारेमा गुनासो
Tartışan arkadaşlar मित्रहरू तर्क गर्दै
Arkadaşlarım मेरो साथीहरु